ဝင်ငွေနည်း ပြည်သူတွေအတွက် လက်လှမ်းမှီမယ့် အိမ်ရာတွေပေါ်ထွက်လာမယ့် ၂၀၂၁ - SKY Media
ဝင်ငွေနည်း ပြည်သူတွေအတွက် လက်လှမ်းမှီမယ့် အိမ်ရာတွေပေါ်ထွက်လာမယ့် ၂၀၂၁
January 20, 2021 January 20, 2021 unfollow	0 Comments
လစဉ် ငါးသောင်းနဲ့ ငွေကျပ်တစ်သိန်းဝင်ငွေရှိသူတစ်ဦးအတွက် လစဉ်အရစ်ကျပေးဆပ်ပြီးဝယ်ယူဖို့လက်လှမ်းမှီတဲ့ အိမ်ရာတွေ ၂၀၂၁ထဲမှာ ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။“ခုဆို သိန်း ၃၀ စုဆောင်းငွေရှိမယ်၊ လစဉ် ကျပ် ငါးသောင်း သွင်းနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင် တိုက်ခန်း တစ်ခန်း ပိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိနေပါပြီ။ တန်ဖိုးသင့်ဆိုရင်တော့ စုဆောင်းငွေနဲ့ လစဉ်သွင်းရတဲ့ငွေ ပိုများမှာပေါ့။တိုက်ခန်းတန်ဖိုးတွေက သိန်း ၈၀ ကနေစပြီး၊ သိန်း ၆၀၀ လောက်အတွင်း အစားစားပေါ့။ နေရာ၊ ကွာလတီ၊ အကျယ်အဝန်း၊ အလွှာတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဈေးတွေတော့ ကွာခြားသွားတာတွေရှိမှာပေါ့ “လို့ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့ဒါရိုက်တာကဆိုပါတယ်။
အိမ်ရာလိုအပ်ချက်ကြီးမားတဲ့ရန်ကုန်အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာ အစိုးရနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးအဌားအိမ်ရာများကိုသာ အဓိကဦးစားပေးတည်ဆောက်သွားမယ့်စီမံကိန်းဖြစ်တယ်လို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်လင်းက မကြာသေးခင်ကပြောကြားထားပါသေးတယ်။တည်ဆောက်မယ့်မြေနေရာ ၊အခန်းအကျယ်အဝန်းဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အခုနှစ်ကုန်မှာစတင်ဖို့ သဘောတူညီမှုတချို့လည်းရရှိခဲ့တာပါ။လက်ရှိရန်ကုန်မှာတော့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်နဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေမှာကျူးကျော်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အဌားအိမ်ရာနှစ်ခုတည်ဆောက်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာအိမ်ဌားနေထိုင်သူဦးရေက သုံးသန်းကျော်လေးသန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ ၂၀၂၀နှစ်ဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။နှစ်စဉ်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေတိုးပွားနေတဲ့ရန်ကုန်မှာအိမ်ဌားနေထိုင်သူက ဆက်လက်တိုးပွားနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
crd….. : iMyanmarHouse.com
လစဉျ ငါးသောငျးနဲ့ ငှကေပျြတဈသိနျးဝငျငှရှေိသူတဈဦးအတှကျ လစဉျအရဈကပြေးဆပျပွီးဝယျယူဖို့လကျလှမျးမှီတဲ့ အိမျရာတှေ ၂၀၂၁ထဲမှာ ပျေါထှကျလာမယျလို့မွို့ပွနှငျ့အိမျရာဖှံ့ဖွိုးမှုဦးစီးဌာနကထုတျပွနျလိုကျပါပွီ။“ခုဆို သိနျး ၃၀ စုဆောငျးငှရှေိမယျ၊ လစဉျ ကပျြ ငါးသောငျး သှငျးနိုငျပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျပိုငျ တိုကျခနျး တဈခနျး ပိုငျဖို့ အခှငျ့အရေးရှိနပေါပွီ။ တနျဖိုးသငျ့ဆိုရငျတော့ စုဆောငျးငှနေဲ့ လစဉျသှငျးရတဲ့ငှေ ပိုမြားမှာပေါ့။တိုကျခနျးတနျဖိုးတှကေ သိနျး ၈၀ ကနစေပွီး၊ သိနျး ၆၀၀ လောကျအတှငျး အစားစားပေါ့။ နရော၊ ကှာလတီ၊ အကယျြအဝနျး၊ အလှာတှပေျေါ မူတညျပွီး ဈေးတှတေော့ ကှာခွားသှားတာတှရှေိမှာပေါ့ “လို့ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ အိမျရာဖှံ့ဖွိုးရေးဘဏျရဲ့ဒါရိုကျတာကဆိုပါတယျ။
အိမျရာလိုအပျခကျြကွီးမားတဲ့ရနျကုနျအပါအဝငျမွို့ကွီးတှမှော အစိုးရနဲ့ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးရှငျတှပေူးပေါငျးပွီးအဌားအိမျရာမြားကိုသာ အဓိကဦးစားပေးတညျဆောကျသှားမယျ့စီမံကိနျးဖွဈတယျလို့ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာနပွညျထောငျစုဝနျကွီးဦးကြျောလငျးက မကွာသေးခငျကပွောကွားထားပါသေးတယျ။တညျဆောကျမယျ့မွနေရော ၊အခနျးအကယျြအဝနျးဈေးနှုနျးသတျမှတျခကျြတှကေိုအဓိကဆှေးနှေးခဲ့ပွီး အခုနှဈကုနျမှာစတငျဖို့ သဘောတူညီမှုတခြို့လညျးရရှိခဲ့တာပါ။လကျရှိရနျကုနျမှာတော့ တောငျဒဂုံမွို့နယျနဲ့ရှပွေညျသာမွို့နယျတှမှောကြူးကြျောတှအေတှကျ ရညျရှယျပွီး အဌားအိမျရာနှဈခုတညျဆောကျထားပွီဖွဈပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့မှာအိမျဌားနထေိုငျသူဦးရကေ သုံးသနျးကြျောလေးသနျးဝနျးကငျြလောကျရှိတယျလို့ ၂၀၂၀နှဈဆနျးပိုငျးက ထုတျပွနျတဲ့ကမ်ဘာ့ဘဏျရဲ့အစီရငျခံစာမှာဖျောပွထားတာပါ။နှဈစဉျရှပွေ့ောငျးလုပျသားတှတေိုးပှားနတေဲ့ရနျကုနျမှာအိမျဌားနထေိုငျသူက ဆကျလကျတိုးပှားနဦေးမှာဖွဈတယျလို့ကမ်ဘာ့ဘဏျက ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
← မြန်မာပြည်အတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သတင်းကောင်းတစ်ခု…
အီရန်တပ် ၏လေ့ ကျင့်ခန်းပြုလု ပ်စဉ်ေ ရငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးအားေ ထာက်လှ မ်းတွေ့ ရှိခဲ့ခြင်း →
Acheter Tamsulosin Pas Cher. Tamsulosin price
Sumatriptan En Ligne * Livraison gratuite * Meilleur prix et de haute qualité
marque Levitra à vendre. Levitra 10 mg
prix marque Benicar – Benicar Meilleur Pharmacie En Ligne Forum
Copyright © 2021 SKY Media. All rights reserved.